Yey u adeegsatay haweeneydii sumeysay Macalin Cumar? - Caasimada Online
Home Warar Yey u adeegsatay haweeneydii sumeysay Macalin Cumar?
Yey u adeegsatay haweeneydii sumeysay Macalin Cumar?
Beledweyne (Caasimada Online) – Taliska Booliska Beledweyne ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyey falkii xalay lagu sumeeyey Allaha u naxariistee marxuum Cumar Macalin Maxamud oo ahaa Macalin dhiga dugsi lagu barto Qur’aanka Kariimka.
Sida ay Caasimada Online u sheegeen xubno ka tirsan ehellada marxuumka ayaa dhowaan guursaday haweeneyda Sumeysay, lamana oga sababta ku kaliftay.